Wasiirka Duulista Iyo Hawadda Somaliland Oo Noqday U Adeegaha Shirkaddaha Dhiba Shacabka.
Saturday August 26, 2017 - 09:02:37 in Wararka by
Hargeysa(CYN)Shalay ayay ahayd markii ay diyaaradda Fly Imaraat oo laga lee yahay wadanka Imaaraadku ay si fool xun ula dhaqantay gabadh muwaadinad reer Somaliland ah.
Gabadhaas oo kamid ahayd shacabkii raacaayey diyaaradda Fly Dubia dulimaadkeedii magaalada Hargeysa ka baxaayey maalintii shalay, iyada oo gabadhaasi sida wararku sheegayaan ay kursigeedii uga kacday qof weyn oo waayeel ah .
Sidoo kalena ay iyada lafteedu ilme yar sidatay oo ay doonaysay meel fudud oo ay ka kic kici karto haddii ay u baahato inay kacdo, taasina ay keentay tacadi ay kala kulantay diyaaraddaasi shaqaaleheeda gabadh kamid ah.
Diyaaraddan waxa isna saarnaa wasiirka Hawlaha Guud iyo Guryeynta Cali Xasan Maxamed ( Cali Mareexaan) oo kamid ahaa rakaabka diyaaradda saarnaa, kaas oo sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga inuu isku deyey in uu xaliyo khilaafka soo kala dhex galay gabadhaasi muwaadinada ahayd iyo gabadha shaqaalaha ah oo u adeegsatay muwaadinadaasi ninkii waday diyaaradda.
Ninka diyaaradda waday ayaa diiday in gabadhaasi saarnaato ama raacdo diyaaradda , sidoo kalena amray in la dejiyo gabadhaasi, taasina waxay keentay in lala hadlo maamulka wasaaradda Duulista iyo Hawada oo uu ugu sareeyo Wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe , waa siduu wasiir Cali Mareexaan qoraalkiisa ku sheegay ee.
Waana ka diiday kabtanka diyaaradduu codsigii wasiirka, iyada oo dibada lasoo dhigay gabadhaasi iyo ilmihii ay wadatay, waxa isna diyaaradda iskaga soo degay wasiir Cali Mareexaan oo ka diir naxay waxa lagula kacay gabadhaasi.
Haddaba wasiirka Duulista iyo Hawadda Somaliland oo warbaahinta kula Hadlay Hargeysa ayaa sheegay in arrintani ay si sax ah u dhacday oo diyaaraddu ku sax sanayd inay gabadhaasi dibada soo dhigto, isaga oo ku doodaayey in ay fadhisan weyday kursigii loogu talo galay.
Diyaaradda Fly Dubai waxay kamid tahay shirkaddaha caalamiga ah ee dalka ka hawl gala, in kasta oo aanu jirin wax nidaam iyo heshiis ah oo ay Somaliland shirkaddaasi la gashay.
Heshiiska maritaanka Hawada iyo cashuurtiisa Ayaan la ogayn in ay ku dhacdo sanduuqa iyo xisaabaadka Somaliland iyo inay ku dhacdo Sanduuqa Nairobi ee Ikaawa, sidoo kalena wasaaradda Duulista Hawada Somaliland wax heshiis ah oo dhanka la dhaqanka Muwaadiniinta ah kulama jirto shirkadaasi iyo kuwa kale ee ganacsi ahaanta u jooga Somaliland.
Shirkaddana waxa dalka keenay muwaadiniin ganacsto ah oo reer Somaliland, kuwaas oo iyagu lacagaha ay ka faa’iidayaan danta kowaad ay u tahay .
Wasiirka oo ay ahayd inuu ilaaliyo danaha dalkiisa iyo ka shacabkiisa ayaa noqday afhayeenka diyaaradda marka loo eego dhacdadii shalay, mana ahaa diyaaraddan oo keliyaata ee waxa dhibaato shacabkan ku haya diyaaraddo badan oo kale, kuwaas oo qaarkood laga lee yahay dalka Somaliya.
Tusaale ahaan diyaaraddaha midoobay ee Jubba iyo Daallo waxay waqtiga Xajka laga soo noqonaayo dhib badan ku hayaan shacabka reer Somaliland ee xujayda ah, iyaga oo ka horaysiiya kuwa Somaliya, ilaa ay kuwaa dhameeyaana aan soo daabulin shacabkaasi reer Somaliland ee Xajka taga.
Wasiirka iyo wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland waa kuwo ku guuldaraystay maaraynta arrinta Hawada Somaliland, iyaga oo aan wax dedaala ka gelin soo celinta Hawada, sidoo kalena ku guuldaraystay inay lacagaha kazoo baxa qaybtooda ka helaan.